Fampitomboana sy kozinina fampifangaroana koba ao China | Chinatown
Voalohany, ny kalitaon'ny karazany sy ny koba isan-karazany vita amin'ny efitrano fikosoham-bary dia alefa any amin'ny fitoeram-bokatra samihafa amin'ny alàlan'ny fitaovana fampitaovana.
Voalohany, ny kalitaon'ny karazany sy ny koba isan-karazany vita amin'ny efitrano fikosoham-bary dia alefa any amin'ny fitoeram-bokatra samihafa amin'ny alàlan'ny fitaovana fampitaovana. Ireo lafarinina ireo dia antsoina hoe lafarinina fototra. Alohan'ny hidiran'ny vovoka fototra amin'ny trano fanatobiana entana dia tsy maintsy mandalo ny fomba fizahana ny lafarinina, fandrefesana, fisarahana andriamby ary famonoana bibikely. Rehefa ilaina ny fampifangaroana lafarinina, ny lafarinina fototra misy karazany maro izay mila ampifanarahana dia arotsaka avy ao anaty fitoeram-pako, afangaro arakaraka ny ampahany iray, ary ampiana additives isan-karazany raha ilaina izany, ary ny lafarinina vita dia aorina aorian'ny fikororohana sy ny fifangaroana. Miorina amin'ny fahasamihafan'ny karazana lafarinina fototra, ny fampitahana ny lafarinina fototra isan-karazany, ary ny additives samihafa, ny naoty samihafa na ny karazana lafarinina manokana dia azo afangaro sy tanterahina.
Fitaovana fampifangaroana koba
Airlock Pressure Positive
Nasiana sivana jet pressure avo
Sivily Jet Pressure ambany
Mpampita visy tubular
Fampiharana ny Flour Blending (indostria fanodinana lalina ny sakafo)
Ity rafitra ity dia misy ny fampitana pneumatic sy ny fitahirizana vovoka lehibe, vovo taonina ary vovoka fonosana kely. Izy io dia mandray ny efijery PLC + mba hahatsapany fa milanja automatique sy fizarana vovoka, ary ny rano na ny menaka dia azo ampiana mifanaraka amin'izany, izay mampihena ny asa ary manalavitra ny fahalotoan'ny vovoka.
Raharaha fampifangaroana koba
Ny atrikasa Flour Blending an'ny fikosoham-bary dia mampifangaro ny lafarinina amin'ny fitoeram-bary isan-karazany mba hanomezana antoka ny fitoniana amin'ny vokatra farany.
Ny atrikasa Flour Blending an'ny fikosoham-bary dia manafangaro karazana lafarinina isan-karazany mifanaraka amin'ny famokarana karazana lafarinina miasa, toy ny lafarinina, ny lafarinina paty ary ny lafarinina bun.
Ny atrikasa famokarana ny ozinina paty dia mandray tavoahangy vovoka vy tsy misy fangarony sy refy fametahana. Ny lafarinina ao amin'ny fitoeram-bozaka vovoka dia ampitaina amin'ny refy fametahana ho an'ny fandrefesana marina, izay mitahiry ny fizotran'ny famongorana ny tanana ary manalavitra ny toe-javatra nampiasan'ny mpiasa ny lafarinina diso.
Ao amin'ny atrikasa Flour Blending ao amin'ny ozinina paty, misy singa marobe ampiana betsaka amin'ny lafarinina hamokarana karazan-tsakafo.
Ny atrikasa Flour Blending an'ny orinasa biscuit dia manampy akora maromaro amin'ny lafarinina. Vita amin'ny vy tsy misy fangarony rehetra izy io ary fanoherana ny harafesina.
Ao amin'ny atrikasa famokarana ozinina biscuit, ny lafarinina dia hiditra ao anaty mixer koba ho afangaro rehefa avy nolanjaina sy namboarina.
Manaraka: MLT Series Degerminator